शरणार्थी थाह नेपाली लोक दल को लागि एक बुकिंग एजेन्ट मलाई गरिएका | शरणार्थी केन्द्र अनलाइन
कसरी एक स्कूल सम्पर्क हुन - शरणार्थीका लागि राम्रो तिर्ने जब & आप्रवासी
शरणार्थी र आप्रवासी लागि रोजगार
द्वारा केथ्रीन तनाव जुन 20 औं, 2017 ब्लग, स्वागतको शरणार्थी, विश्व शरणार्थी दिवस
शरणार्थी थाह नेपाली लोक दल को लागि एक बुकिंग एजेन्ट मलाई गरिएका
शरणार्थी थाहा ल्याइएको मलाई शिक्षक हुनुको फिर्ता शिक्षार्थी हुनुको मा प्राप्त.
म एक सांस्कृतिक शास्त्र प्रोफेसर हुँ र मेरो काम संस्कृति र क्रस-सांस्कृतिक संचार बारेमा सिकाउन छ. म पनि एक अवैतनिक Storyteller छु, एक कलेज विद्यार्थीको अभिभावक, र गायक-गीतकार आमोस ली र रयान Montbleau को लोक संगीत को एक प्रशंसक. म एकदम बिट कूच र विदेश बस्ने र विश्वका मानिसहरू मेरो जीवन को पछिल्लो तीन दशकसम्म मलाई त दयालु र उदार भएको. म एक शान्ति कोर स्वयंसेवक हुँदा, मान्छे धेरै गरिब मलाई मलाई सवारी दिनुभयो भन्दा, मलाई सिकाउनुभयो, मलाई खुवाउनुभयो, र मेरो wildest कल्पना परे विचारशील र अनौठो उपहार मलाई बौछार. मेरो fieldwork मलाई मदत गर्न प्रयासमा, असंख्य मानिसहरू मेरा धेरै probing सहेका छन्, अनुभवहीन, र व्यक्तिगत प्रश्नहरू.
एक स्थानीय सामुदायिक केन्द्र मा एक स्वयंसेवक रूपमा मेरो भूमिका मा (Midtown युटिका सामुदायिक केन्द्र) देखि 2014, शरणार्थी अनुभव मेरो समझ हुर्किसकेका छ, धेरै तरिका मा मेरो दृष्टिकोण संग त्यहाँ मद्दत गर्न र तिनीहरूलाई स्वागत.
म बस बिहान अप प्राप्त गर्न सक्षम भएका शरणार्थी श्रद्धा छु, केहि पनि होईन त्यसैले gracefully आफ्नो नयाँ जीवन निर्माण.
म मा स्थानीय शरणार्थी केन्द्र मा व्याख्याकारों लागि प्रशिक्षण समयमा टेक Monger भेट 2011. म एक थाई र लाओ दोभासे हुन प्रशिक्षण थियो, र टेक नेपाली दोभासे हुन प्रशिक्षण थियो. म सिर्फ नेपाल एक यात्रा बाट फर्के थियो, म कहाँ थिए भनेर एक अखबार लेख देखेका थिए 400 नेपाली मेरो सानो केन्द्रीय न्यूयोर्क शहर बस्ने (युटिका). म त विचार गरेर चासो थियो, र परम्परागत नेपाली टोपी टोपी वा sarongs मा मान्छे को लागि देख शहर वरिपरि ड्राइभिङ गरिएको थियो, कुनै लाभ गर्न. हाम्रो शहर धेरै विविध छ, शरणार्थी लगभग हाम्रो जनसंख्याको ¼ बनाउने साथ, त्यसैले बर्मा बाट थुप्रै शरणार्थी छन्, थाईल्याण्ड, कम्बोडिया, लाओस, र भियतनाम वरिपरि. तर यो म नेपाली को सुनेका पहिलो थियो. यसलाई गरिएका रूपमा, तिनीहरूले वास्तवमा केही थिए 100,000 भुटानी शरणार्थी जातीय नेपाली थिए तर मा भूटान बहिष्कार गरिएको थियो जो 1992 र तिनीहरूले बारे मा resettled गर्न सुरु सम्म थियो अपेक्षाकृत पूर्वी नेपाल भूल गरिएको 2008.
टेक Monger उहाँले लागि नेपाल शरणार्थी शिविरमा बस्ने गरिएको थियो कि मलाई भन्नुभयो जो पहिलो थियो 18 वर्ष. म स्तब्ध भएको थियो. म शरणार्थी को यो समूह न अवधारणा को कहिल्यै सुनेका थिए जो कोहीले लगभग दुई दशक लागि शिविरमा फँस हुन सक्ने. अब म यो अपेक्षाकृत साधारण छ भनेर थाहा.
टेक प्रकारको छ, हास्यास्पद, र संसारमा सबै भन्दा राम्रो मुस्कान छ. उहाँले एक क्यासिनो मा एक बिक्रेता छ. उहाँले इलेक्ट्रनिक्स र फोटोग्राफी राम्रो छ र आफ्नो नजिक परे बुद्धिमानी हुन्छ 30 वर्ष. उहाँले आफ्नो परिवार र आफ्ना समुदाय बारेमा गहिरो चासो लिनुहुन्छ. हामी प्रत्येक अन्य जान्न पायो रूपमा, टेक आफ्नो जीवन र आफ्नो समुदाय बारेमा मलाई भन्नुभयो. हामी 40 घण्टे प्रशिक्षण समयमा हाम्रो नवोदित मित्रता बारेमा obnoxious हुन छैन प्रयास, तर इमानदार हामी हरेक मुक्त खर्च (र उधारो) को भूटानी अनुभव कुरा मिनेट. म चाँडै आफ्नो विस्तारित परिवार थाहा पायो, बारेमा 75 मान्छे. म "Kath बहिनी रूपमा गुना मा ल्याइयो,"र बच्चा नामकरण समारोह गर्न जन्मदिन र विवाह सबै कुरा गर्न सहरमा तीन shamans द्वारा समारोह निमन्त्रणा गरिएको थियो, कूद डाक्टर रूपमा नेपाल ज्ञात. म बच्चाहरु मसँग चाल-वा-उपचार ल्याए, र पुस्तकालय storytime र नृत्य कक्षाहरू तिनीहरूलाई आमन्त्रित. टेक गरेको विस्तारित परिवार ध्यान मलाई enveloped, पाठ सन्देशहरू, र समोसे.
टेक शिविरहरूको आफ्नो संघर्ष को अक्सर कुरा र कसरी आफ्नो साथीहरूसँग संगीत प्ले ती सबै एक सानो बिट राम्रो महसुस बनाएको.
टेक र आफ्ना साथीहरूलाई यसको शिखर मा थियो कि एउटा सानो लोक दल र नृत्य troupe सुरु गर्ने निर्णय 75 सदस्य. हामी लगभग प्रदर्शन 10 प्रति वर्ष पटक, संगीत चाडहरूमा, संग्रहालयहरु, कलेज, र विद्यालय. बैंड र डान्सरहरू कारण जटिल कारक को एक किसिम र अर्को अवस्थामा टेक गरेको कदम गर्न पहिले को प्रदर्शन केही वर्ष मा धीमा, तर म ती पटक को मिठाई सम्झनाहरु सधैं हुनेछ. म विशेष गरी मात्र हल्का रूपमा खुला lightbulbs को संग अधूरा basements मा अभ्यास प्रेम, र पहिलो पटक लागि harmonium गीतहरू सुनेर तिनीहरूले बाल्यकाल देखि प्ले भएको थियो कि.
म धैर्य को एक आफूले पाएको नयाँ भावना र नेपाली कसरी समय बुझ्न को एक सहज अर्थमा छ, जो मेरो आफ्नै बाट धेरै फरक छ. पनि म गर्व महसुस. म त अक्सर तिनीहरूलाई शुरू चरण मा आफैलाई फेला, र यति तिनीहरूलाई प्रेरित महसुस. मेरो हृदय सबै घन्टा बिताए थिएन मान्छे म जान्न रही थियो आफ्नो संस्कृति साझेदारी गर्न अवसर मा पुग्यो. म अझै पनि फिर्ता जा र हाम्रो प्रदर्शन को भिडियो हेर्दै प्रेम.
जस्तै, यो एउटा थियो 2012 को Suny पलिटेक्निक संस्थान मा.
टेक र आफ्नो समुदाय चिन्न मलाई पहिलो हात देखाए हाम्रो शरणार्थी नीति अयोग्य कसरी. हामी शरणार्थी स्वीकार तर हामी (एक समाज रूपमा) सधैं के तिनीहरूले नयाँ र सफल जीवन मा एक निष्पक्ष शट लागि आवश्यक तिनीहरूलाई दिन सुसज्जित छैन. तिनीहरूले लागि मद्दत प्राप्त 90 कि तर दिन केही परिवारको लागि पर्याप्त छैन, जो पहिले नै धेरै आघात र संघर्ष मार्फत गरिएको छ. टेक देखि, म जवान मान्छे को भूमिका को लागि यति धेरै आदर प्राप्त (20-30 वर्ष पुरानो) बचत र आफ्नो संस्कृति मदत, र आफ्नो परम्परा संरक्षण.
अन्तमा, म यसलाई मानिसहरूलाई मदत गर्न अर्थ के सिके. त्यहाँ मद्दत गर्न धेरै तरिकाहरू छन्, र विभिन्न मान्छे सहज महसुस फरक कुरा गरिरहेको. म एक सामुदायिक केन्द्र मा पिचिंग र शरणार्थी तिनीहरूले सबैभन्दा आवश्यक बारेमा हरेक दिन सुन्न आफूलाई सुरु गर्दा म पूरा महसुस.
म यस जीवन शैली सबैलाई फिट छैन, र ठीक छ. मान्छे शरणार्थी मदत गर्न प्रयास अन्य बाटो मा खडा गर्दा मलाई सामना गर्न को लागि धेरै मुश्किल कुरा हो. त्यहाँ केही फोन कल संग राम्रो लागि जीवन परिवर्तन गर्न सक्ने मान्छे र एजेन्सीहरू छन्, तर तिनीहरूले मुछिन गर्न चाहँदैनन् वा आवश्यक छ के आकलन गर्न समय लिने छैन. केही मानिसहरू पनि तिनीहरूले मर्यादा को जीवित जीवन को योग्य छैनन् जस्तै शरणार्थी कुरा. "कम से कम यो तिनीहरूले नेपाल बस्ने भन्दा राम्रो छ।" अथवा, मेरो उद्देश्य जीवनमा यी दिन "तिनीहरूले नातेदार भनेर फारम अनुवाद गर्न पाउन पर्छ।" समय लिन र त्यसपछि कल छ, को सवारी दिन, फोटो सुरक्षित, र कथाहरू मनाउन.
म युटिका मा शरणार्थी थाहा पायो कसरी को कथा पनि यो TEDx युटिका कुरा बताउनुभयो छ 2014:
विश्व शरणार्थी दिवस को सम्मान मा 2017, यस शरणार्थी केन्द्र अनलाइन कसरी शरणार्थी राम्रो हाम्रो जीवन बनाउन को कथाहरू सङ्कलन छ.
यो शरणार्थी केन्द्र अनलाइन विश्वास गर्छ newcomers हाम्रो देश राम्रो ठाउँ बनाउन. यो हामी र हाम्रो समुदाय साथै लाभ - शरणार्थी resettlement छैन गर्न नैतिक वा नैतिक कुरा केवल छ. देश भर व्यक्तिहरूलाई यी कथाहरू देखाउन कसरी जानने, शिक्षा, काम, र सायद सबैभन्दा महत्वपूर्ण, साथी हुनुको, शरणार्थी अमेरिका को ज्यान सुधार छन्.
शरणार्थी आफ्नो जीवन राम्रो बनाएका थाह छ?
बारेमा केथ्रीन तनाव
केथ्रीन Stam एक प्रोफेसर छ, आमा, र आज, नेपाली लोक दल को लागि एक बुकिंग एजेन्ट.